ह्याप्पी लाईफ होममा बालसहित्यको ह्याप्पी रमाइलो | Ketaketi Online
Home » ह्याप्पी लाईफ होममा बालसहित्यको ह्याप्पी रमाइलो
posted by ketaketionline on Sun, 07/16/2017 - 08:50
गत शनिवार दिउँसो ह्याप्पी लाईफ होम कीर्तिपुरको वातावरण अर्कै थियो । बाहिर चर्को घाम लागिरहेको थियो । भित्र बालबालिकाहरु ‘डस्टर उड्यो’ र ‘फर्सी बहादुरको कथा’ सुनेर रमाइरहेका थिए । कथा भन्न पुगेका थिए कथावाचक कार्तिकेय । उनले बालबालिकालाई ‘फुच्ची नानी सूर्य भेट्न गइन्’, ‘आमा, पपी छुट्यो’ लगायत आफूले रचना गरेका रमाइला–रमाइला कथाहरु सुनाए ।
कथा सुन्दै जाँदा बालबालिकाहरु दङ्ग परे ।
‘लौ अब चित्र कोर्ने अनि कथा लेख्ने !’
यो आवाजसँगै बालबालिका कथाका पात्रमा हराउन थाले । उनीहरु कथामा भएका पात्रको कल्पना गर्दै थरीथरीका चित्र कोर्न थाले, अनि एक अर्काको चित्र हेर्दै झन बढी रमाए ।
यसरी शनिवारको विदाको दिन सफलता शिक्षा सदन, कीर्तिपुरमा पढ्दै ह्याप्पी लाईफ होममा आश्रित २२ बालबालिकाले कथाको रमाइलोमा २ घन्टा समय बिताए । उनीहरुलाई यो अवसर समाजसेवी प्रा.डा. अच्युतमणि आचार्यको सौजन्यमा बालसाहित्य प्रतिष्ठान नेपालले प्रदान गरेको थियो । प्रतिष्ठानले फरक परिवेशका बालबालिका माझमा माउन्ट एभरेष्ट कथावाचन अभियान चलाइरहेको छ । यस अभियानले हालसम्म देशको ३७ जिल्लामा कथावाचन गरिसकेको कुरा प्रतिष्ठानका संरक्षक प्रा.डा. अच्युतमणि आचार्यले बताए ।